စွပ်စွဲခံနေတဲ့ လူများအတွက် ရှင်းလင်းချက်
အခု အချိန်အခါကာလဟာ နိုင်ငံရေး အပြောင်းအလဲ ဖြစ်လာပြီမို့DVB နဲ့ယင်းတို့ ကြောထောက်နောက်ခံအသင်းဖြစ်တဲ့ Media Frontiers ရဲ့အကူအညီများဖြင့် မြန်မာ ဟက်ကင်းအသင်းများကို တိုက်ခိုက်တာဘဲ ဖြစ်ပါတယ်။ Media Frontiers ဆိုတာဟာ VirtualRoad.org (qurium media foundation) ကို တည်ထောင်ပြီး DVB စတဲ့ သတင်းမီဒီယာများ Sites များကို Cyber Attack မခံရရအောင် supporting
March လတွင် မြန်မာအစိုးရအသစ် တစ်ရပ်တက်တော့မည်ဆိုတော့ အချိန်ကိုက် ဟန်ချက်ညီညီ ယခုလို တိုက်ခိုက်မူလုပ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်.... အဓိက ရည်ရွယ်ချက်မှာ
၁) UG ထဲရှိ လူတိုင်းကို BHG အသင်းသားအဖြစ် သတ်မှတ်ပြီး မြန်မာဟက်ကာများကို တိုက်ဖျက်ဖို့ 
၂) ထိုင်းနိုင်ငံ အစိုးရ လိုက်လံဖမ်းဆီးတဲ့အခါ အထောက်အကူရဖို့
၃) လက်ရှိအစိုးရကို တစ်ချက်ခုတ် ၂ ချက်ပြတ် စနစ်ဖြင့် ပုတ်ခတ်ဖို့
၄) ထိုင်းမြန်မာ လက်ရှိ အစိုးရအချင်းချင်း နာမည်ဖျက်ဖို့
တို့ဖြစ်ပါတယ်။
သို့ပေမယ့် ယင်းတို့ တစ်ဖက်သတ် စွပ်စွဲချက်များဟာ မှန်ကန်မူမရှိပါ။ BHG ဟက်ကာ Group မှ လူများ
ဆိုပြီး သက်သေအထောက်မရှိဘဲ လူတကာကို စွပ်စွဲချက်မှာ အရည်အချင်းနဲ့ ကျွမ်းကျင်မူမရှိတဲ့ Qurium team ရဲ့၃နှစ်လုံးလုံး စုဆောင်းဖေါ်ထုတ်မူသာ ဖြစ်ပေသည်။
DVB ကတော့ BHG ဟက်ကာများဟု Suspect ဖြစ်သည့် လူများကို (မြေနီကုန်းသား - ဘိုတင်လှ) ကုလား အကူအညီဖြင့် လိုက်လံစုံစမ်းခဲ့သည်ဟု သိထားရပါသည်။ ကုလား ဘိုတင်လှ ၀ယ်ထားခဲ့တဲ့ domain ကုန်သည့်အခါ qurium သို့ လွဲပြောင်းပေးခဲ့ကြောင်းလဲ သိထားရပါသည်။ www.blinkhackergroup.org ကို ကုလားဘိုတင်လှ မှ တစ်ဆင့်ယူပြီး BHG မှ တင်ခဲ့သမျှ post
များကို သူတို့ က ပိုက်ဆံအကုန်အကျခံပြီး သက်သေအနေနှင့် သိမ်းထားကြသည်ဟု ဆိုသည်။ BHG က domain အသစ် bhg-myanmar.org ကိုလည်း ဖျောက်လိုက်တော့ သူတို့ က http://blinkhackergroup.blogspot.com/ ကို မရှာဖွေနိုင်ခဲ့ပေ။ ယင်းတို့ Doxing page မှ page တစ်ခု ဖြစ်သည့် about-this-site-domain-name တွင် သူတို့ ရဲ့ အရည်အချင်း ကို တွေ့ မြင်နိုင်သည်။ Blogspot tracking သင်တန်းကို မြန်မာ lamers တွေက သင်ယူလျှင် တတ်ကောင်းတက်လာမှာမည်ဟု BHG က ထင်မြင်မိသည်။
Qurium team ရဲ့ အကြောင်းကို ပြောရလျှင် မြန်မာ ဟက်ကာများကို ပြန်ဟက်ဖို့အရည်အချင်းတစ်ခုမျှ မရှိပေ၊ အဆိုးဆုံးမှာ သူတို့ က မြန်မာစကား မတတ်ဘဲ မြန်မာသတင်းမီဒီယာတို့ ရဲ့ဘာသာပြန် အကူအညီဖြင့်သာ လိုက်လံစုံစမ်းခဲ့သည်၊ စုံစမ်းသည်ဆိုသည်မှာလည်း Facebook မှ့ တဆင့်သာ ဖြစ်သည်၊ ကုလားရခိုင်အရေးတွင် Qurium team သည် သတင်းမီဒီယာတွေကို ကာကွယ်နိုင်စွမ်း တစ်ခုမှာ မရှိခဲ့ပေ၊ အဲဒီတုန်းကလည်း DVB, Irrawaddy လည်း အဟက်ခံရပေါင်းလည်း မနည်းခဲ့ပေ။
သူတို့အရည်အချင်း ရှိခဲ့ရင်တော့ website ဘဲ ဖြစ်ဖြစ် အီမေးလ်ဘဲ ဖြစ်ဖြစ် အဟက်ခံခဲ့ရလျှင် ဘယ်သူဘယ်ဝါ ဘယ်နေရာက လုပ်နိုင်တယ်ဆိုတာတောင် ပြောပြနိုင်လိမ့်မယ်။ BHG Member များအထိတောင် ရောက်နိုင်ပါသေးတယ် ....Media တိုင်းကို ဟက်ခဲ့သမျှတိုင်း Logs များ ကျန်ခဲ့တာဘဲ။ သူတို့အရည်အချင်းက logs သက်သေများကိုတောင် မကြည့်နိုင်ခဲ့တာကို သူတို့ အဆင့်ကို ဖေါ်ပြခဲ့ပါဘဲ။ နောက်တစ်ခုက facebook မှာ ရေးသားချက်များကို လိုက်ကြည့်ပြီး ဘယ်သူတွေက စတင်လည်းဆိုပြီး စတင်တဲ့လူတွေကို BHG လို့သတ်မှတ်ကြတော့တာ အင်မတန် ညံ့ဖျင်းသော လုပ်ရပ်သာ ဖြစ်သည်၊ စာဖွဲ့စရာမဟုတ်သော cloudflare လေးပြောင်းပေးပြီး DDoS Attack လေး ကာကွယ်ပေးတတ်ရုံလေးနဲ့ သူတို့ ကို သူတို့ Security expert အဖြစ် ဟုတ်လှပြီလို့ထင်နေသည်၊
Cyber Bully အရ Troll ကြသောအရာများကို Underground ထဲက Blackhat များက ပိုနားလည်သည်၊ Troll တိုင်းကတော့ သူတို့လိမ်လည်ပြီး သူများတကာကို အပုတ်ချစွတ်စွဲသမျှကို ဂရုမစိုက်ဘဲ သူတို့ဘယ်လောက်ထိ ပေါက်ကရ အဆင့်မရှိတဲ့အချက်တွေလုပ်မလဲ အခြေအနေကိုသာ စောင့်ကြည့်နေခဲ့သည်။ ပထမနေ့ နှင့် ဒုတိယနေ့ တွင် ပေါက်ကရ သတင်းများ အဖြစ် DVB တိုက်ခံရခြင်း လိမ်လည်ပြီး ပြောဆိုကြသည်၊ အဲလိုလိမ်ညာပြောသည့်အထဲမှာ အရင်တုန်းက ကုလားရခိုင်အရေးတုန်းက ဆောင်းပါးဟောင်းကို Media တိုင်းက မြင်အောင် သူတို့သတင်းဟောင်းကို မြန်မာလူမျိုး နာမည်ပျက်အောင် ပြန်လည် အသက်သွင်းခြင်းဖြစ်သည်၊ ၃ ရက်မြောက်တွင် DVB.no ကိုလည်း တိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရသည်ဟု ထပ်ပြီး လိမ်လည် ပြောဆိုကြသည်။ နောက်ဆုံး ဒီနေ့ ရက်တွင်မူ အခြား လိမ်စရာမရှိတော့သဖြင့် လွန်ခဲ့တဲ့ ၅ လစာ ရှာဖွေထားတဲ့ဟာနဲ့ပြန်စုနေတယ်လို့ပြောကြသည်၊ ပြီးတော့ တခြား တက်သစ်စ မြန်မာကလေးတွေ newbie chat ကို ဖော်ပြီပြီး BHG ဟု စွတ်စွဲပြန်သည်၊ ထိုမျှ အသုံးမကျတဲ့ ကောင်တွေက Troll လုပ်သမျှကို BHG အဖို့ ဖြေရှင်းရန် ရီစရာပင်ဖြစ်နေသည်။ သူတို့လုပ်နေတာကို တစ်ကမ္ဘာလုံးက စိတ်ဝင်စားနေပြီလို့ထင်နေကြသည်။ အမှန်တော့ မြန်မာ့သတင်းဟာ ဘယ်နေရာမှာ အရာမရောက်ပေ။ လုပ်နေတာကလည်း မှန်ကန်မူလည်း မရှိကြပေ။
Qurium မှ ထိုင်းနိုင်ငံ အစိုးရအား BHG ကို ဖမ်းဆီးနိုင်ရန် အထောက်အကူ ပေးချင်သော်လည်းပဲ အရည်အချင်း မရှိသည့် သူတို့အဖို့ တကယ့် လက်တွေ့တွင် အသုံးမ၀င်ပေ။ ထိုင်းအစိုးရမှ အင်တာနက် IP ဆယ်ခု မိထားကြောင်း ထုတ်ပြန်ကြေငြာထားသော်လည်း ထိုင်းအစိုးရ ကိုယ်တိုင်ပင်မှ လိုက်လံ စုံစမ်းထောက်လှမ်းရန် မဖြစ်နိုင်သေးပါ၊ အိုင်ပီဆယ်ခုမှာလဲ အစစ်အမှန်များ မဖြစ်နိုင်ပေ။
ဆိုက်ဘာပြစ်မှုများကို ထောက်လှမ်းရာတွင် IP ကို အခြေခံပြီး ထောက်လှမ်းရမည်ဖြစ်သော်လည်း အတွေ့အကြုံနှင့် အရည်အချင်းမရှိသော Qurium အဖို့ Social Network များမှ သူတို့ထင်မြင်သော လူအချို့ကို သက်သက် အထောက်အထားမရှိဘဲ စွပ်စွဲမူတစ်ရပ်သာဖြစ်ပါသည်။
လက်ရှိအစိုးရနဲ့ပတ်သတ်သည်ဟု စွတ်စွဲချက်ဖြင့် သူတို့ရေးသားထားသော အရေးအသားများကို ဖတ်ကြည့်လျှင်လည်း မြန်မာစစ်တပ်ဘက်မှ စေခိုင်းထားသယောင် ထင်ယောင်ထင်မှား ဖြစ်စေရန် ရည်ရွယ်ရေးသားထားသည်ကိုလဲ တွေ့ရှိရပေသည်၊ မြန်မာစစ်တပ် နှင့် အဆက်အသွယ် BHG member များက ရှိနေသည်ဟု စွပ်စွဲထားသော လူများကို လေ့လာကြည့်လျှင်လည်း IT Field နှင့်ပင် မသက်ဆိုင်သော သူများပင် ပါဝင်နေသည်ကိုတွေ့ရပါသည်။ BHG ခံယူချက်ကို သဘောကျနှစ်သက်သည့် အတွက် BHG နှင့် ပတ်သက်သည့် သတင်းများကို Social Network ပေါ်တွင် share လုပ်သူ သာမန် user များပါ မကျန် စွပ်စွဲမှုထဲတွင် ပါဝင်နေပေသည်။ လက်ရှိ အစိုးရကို တိုက်ခိုက်လို သဖြင့် Qurium အနေဖြင့် ရည်ရွယ်ချက် တစ်ခုခု အတွက် မသက်ဆိုင်သူများကိုပါ BHG Member များအဖြစ် ထည့်သွင်းထားကြောင်း ပေါ်လွင်လာပြီဖြစ်ပါသည်။
မြန်မာ Media ဘာကြောင့် BHG ရဲ့ တိုက်ခိုက်မှုခံခဲ့ရလဲ
- အမျိုးသားရေးစိတ်ဓါတ်နဲ့ပြည်သူအပေါ်အတွက်သာ သတင်းကို တိကျမှန်ကန်စွာ ဖေါ်ပြရေးသားခြင်း ရှိခဲ့လျှင် ကျနော်တို့တိုက်ခိုက်စရာ မလိုအပ်ပေ။ ဘယ်တော့မှာ ကျနော်တို့Target ထဲသို့ရောက်လာမည် မဟုတ်။ ကျနော်တို့တိုက်ခိုက်တာဟာ မတော် မတရား ကြောင့်သာ ဖြစ်သည်။
ကျနော်တို့သိသော media ဆိုသည်မှာ စာဖတ်ပြည်သူများ အတွက်သာ ဖြစ်ရမည်။ မိမိတို့ စားကွက် မိမိတို့ ဘက်လိုက်ရေးသားမှုများ အတွက်သာ မဖြစ်စေရ။ သတင်းတစ်ပုဒ်မှ ဒေါ်လာရရေးအတွက် ရေးလာကြလျှင် သတင်းမဟုတ်တဲ့ အတင်းများ ကောလဟာလများသည်လည်း သတင်းများလည်း ဖြစ်လာမည်။ သတင်း မီဒီယာသည် ဘက်လိုက်ရေးသားမှု အတွက် ကလောင် လက်နက် တစ်ခု မဖြစ်စေရ။ တစ်ဦးကောင်းဖို့အတွက် အခြားသူများအား သတင်းဖြင့် နာမည်ဖျက်ခြင်း သတင်းဖြင့် ပြည်သူများအား လှုံဆော် သွေးထိုးခြင်း မဖြစ်စေရ။ ဘယ်သူသေသေ ငတေမှာရင် ပြီးရော ဆိုလျှင်ဖြင့် သတင်းထောက် ကျင့်ဝတ်များနှင့် သွေဖြည်နေလိမ့်မည်။
BHG အဖွဲ့ စတင်ဖွဲ့ စည်း ကတည်းက မြန်မာအစိုးရပိုင်များကို ပစ်မှတ်ထား တိုက်ခိုက်ခဲ့သည်။ စစ်တပ်အုပ်ချုပ်သည့်သည့်စနစ် ပြောင်းလဲလာသည့်အချိန်တွင် BHG အဖွဲ့ ကို ရပ်နားခဲ့သည်။ နောက်ပိုင်း ကုလားရခိုင်အရေး ပေါ်လာတဲ့အခါ ကျနော်တို့အမျိုးသားရေး စိတ်ဓါတ်ဖြင့် ဘင်္ဂလီကုလားအားပေးတဲ့သူများ Jihad အားပေးသော ကုလားများ ပြီးတော့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် အစိုးရပိုင်းများကို တိုက်ခိုက်ခဲ့သည်။
ဒီမိုကရေစီ အပိုင်းသို့ရောက်လာသမျှ ကျနော်တို့အစိုးရပိုင်းကို လှစ်လှူရှူခဲ့ပြီး ဒီမိုကရေစီအရေးပိုင်းတွင် လုပ်ရှားနေပြီး မမှန်မကန်ပြုလုပ်နေသော လူများဆီသို့ဦးတည်ခဲ့သည်။ ဦးတည်လာခဲ့သည့်အခါ သတင်းမီဒီယာ သမားများက BHG အဖွဲ့မှာ အစိုးရဘက်တော်သား လူများဟု ထင်ယောင်ထင်မှားဖြစ်စေရန် စွပ်စွဲခဲ့သည်။ အမှန်မှာကား အမျိုးသားရေးအတွက် နိုင်ငံရေး လုပ်ဆောင်မူကို အားပေးသော BHG အဖွဲ့ သည် ဒီမိုကရေစီဟု ပါးစပ်မှ ပြောပြီး ဒီမိုကရေစီနည်းမကျသော လုပ်ငန်းများကို မြင်လို့ဆော်ပလော် တီးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ သတင်း အလွဲသုံးစား လုပ်သော မြန်မာမီဒီယာပိုင်များကိုလည်း တိုက်ခိုက်ခဲ့သည်။ ဒီမိုကရေစီကျကျ လိုက်နာမည့် အစား စည်းကမ်းပျက်မူများကြောင့် တိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရသည်။
တော်တော်များများ မြန်မာသတင်းမီဒီယာသည် အမျိုးသားရေးစိတ်ဓါတ်နဲ့ပြည်သူအပေါ်အတွင် သတင်းကို တိကျမှန်ကန်စွာ ဖေါ်ပြရေးသားနိုင်ခြင်း မရှိခဲ့ပေ၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် ခိုးဝင်နေကုလားများကို ခိုးဝင်နေကုလားများဟုပင် ပြောမပြနိုင်တဲ့သတင်းများအား ကျနော်တို့မနစ်မြို့ ပေ။ နိုင်ငံတကာ စိတ်ဝင်စားအောင်သာ သမိုင်းလိမ်ကုလားများအားအတွက် နိုင်ငံတကာ အကူအညီပေးရန်နဲ့အစိုးရအား ဖိအားပေးရန် လုပ်ရပ်ကို ရပ်တန့် ရန်အတွက်သာ လုပ်ဆောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ သတင်းမီဒီယာသည် Propaganda မဖြစ်စေရ၊
ယခု ပြသနာတွင်လဲ မီဒီယာများမှ အပြစ်မဲ့ မသက်ဆိုင်သူများကို ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနှင့် တစ်ဖက်သက် စွပ်စွဲထားမှုများသာ ဖြစ်ပါတယ် ...နာမည်ဖျက်ခံရသူများအနေနှင့် တရားစွဲမည် ဆိုလျှင် Media Frontier, DVB ရဲ့တာဝန်ပေးမူကို ယူခဲ့တဲ့ Qurium Group နှင့် သူ့ အပေါင်းပါများ ကို တရားစွဲဆိုနိုင်သည်၊
အောက်ပါ လိပ်စာများကို အသုံးပြုပြီး တရားစွဲဆိုနိုင်ပေသည်။
Renstiernas gata, 35
c/o Brand X ApS
Frederiksborggade 15, 2nd Floor
254, Rm# 21, Seikkantha St., Upper Blk.,Kyauktada Township. Yangon
09-421120828 , 09-49222558
DVB - Tarmwe
Bldg 18,Rm 4,Sabei St.,Yuzana Mingalar City Housing
01 297910, 01 9000904, 01 1221912
9:56 PM News0PERMALINK
Is it lame enough to prove yourself at doxing someone without knowing?
> To those who think they can dox BHG with wrong information.
Your finding is nothing in Myanmar underground society, it rather amused us. You think, people who shared BHG news on facebook are BHG members, then suck to be you. Keep on trying to convince someone by screenshot of all public posts of BHG fans, and some of make up forensic reports. Don't you even know how to run honeypot? Did you ever haveachance about finding the BHG guys at your honeypot?
Beside, all of your reports are kinda like gossip/made up by someone who don't even know what the BHG is. Where do you get that guy, who think everyone he finds are BHG members. Here isatip for you. If he is giving you more than6members, you are out of luck. If he gave the name of other group's members as BHG, then he failed you again, researcher! Is that the skills you got, asking someone/keep on track on fan posts only? Without knowing Myanmar underground online network, your research project will not even get off the ground. Before you show some of your so-called research reports more, we would like to give you 10 years to figure who are real6active members of BHG, and our locations. Don't be rush, take your time, you gotadecade.
Those allegations you made up against BHG fans are trouble some you asked for, you know what the consequence will be. We will watch our fan respond to you.
Remember, BHG always claims responsible when we did, and we stand for the right. Don't try to makeamess with your wrong doxing, you gotadecade of chance to sniff.
8:49 AM News0PERMALINK
Please welcome aboard, Syd Nomád & Mr.White Hat of 3rd Gen BHG.
We are happy to announce for new crew members (Syd Nomád & Mr.White Hat) as well as short-list members (Cyb3rw4tch3r & Blaze Fallz). Your experience and vision will beagreat asset to this group, and We know that the team is looking forward to working with you.
General စာမေးပွဲ အောင်သူများကိုလည်း ISO 27000 Serials - Security Researcher Certificate များကို ပေးအပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်၊ Certificate ကို ပိုင်ဆိုင်သူတုို့ သည် BHG အသင်းဝင်ဖြစ်တယ်လို့သတ်မှတ်ပေးထားခြင်း မရှိပါ၊ Security Researcher အောင်လက်မှတ်ကိုသာ ရယူပိုင်ဆိုင်ခြင်းသာ ဖြစ်ပါတယ်၊
Pen-testing မှာ အောင်မြင်စွာ ဖြေကြားနုိုင်တဲ့သူမှာသာ BHG အနေဖြင့် သတ်မှတ်ပေးထားခြင်း ခံရတာ ဖြစ်ပါတယ်၊သတ်မှတ်ခံသူများကတော့
Syd Nomád နဲ့Mr.White Hat ဖြစ်ကြပါတယ်၊
Pen-testing မှာ technicial အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် အခက်အခဲများစွာကြားကနေ ဖြေဆိုကြခဲ့ပြီး report များကို မိမိရသလောက် တင်သွင်းခဲ့ကြသောသူများကိုသာ BHG 3rd Gen အတွက် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါသည်၊ အဲဒီထဲမှာ အမှတ်အများဆုံးသော လူများကို BHG အသင်းအ၀င်အဖြစ် သတ်မှတ်ခဲ့ပါသည်၊
နောက်ထပ် Submit လုပ်ခဲ့တဲ့လူများဖြစ်တဲ့ Cyb3rw4tch3r & Blaze Fallz ကိုတော့ ကျနော်တို့short lists ထဲတွင် ထားရှိမယ်ဖြစ်ပြီး သူတုို့ ရဲ့လေ့လာမူများ လုပ်ဆောင်ချက်များကို ၂ လ3လ အတွင်း review လုပ်ပြီးမှသာ BHG 3nd Gen အဖြစ်သတ်မှတ်ပေးမယ် ဖြစ်ကြောင်းကြေညာအပ်ပါတယ်၊
၂၀၁၄ တွင် BHG နဲ့ ပတ်သတ်လို့အချက်အလက်များကို BHG website သို့ မဟုတ် ဒီ facebook တွင်သာ ဖော်ပြသွားပါမည်။
BHG အနေနှင့် BHG Member အသစ်ဘဲ ဖြစ်ဖြစ် အဟောင်းဘဲ ဖြစ် members တွေ personal အရ ဘာတွေလုပ်လုပ် BHG ကိုယ်စားပြု လုပ်ဆောင်ချက် မဟုတ်ခဲ့လျှင် official announcement ကို Facebook or Website တွင် ရှိမှာ မဟုတ်ပါဘူး ၊ Announcement မရှိခဲ့လျှင်တော့ BHG နဲ့လုံးဝ မပတ်သတ်ပါ၊
4:44 AM Announcement0PERMALINK
http://www.Irrawaddy.org?hacked and htttp://election-bur.irrawaddy.org?hacked got hacked by BHG.
8:34 AM News0PERMALINK
http://myanmarailways1887.com/ got pwned.
http://www.27seagames2013.com/ got pwned.
9:40 AM News0PERMALINK
10:33 AM News0PERMALINK
8:14 AM Cyberwarfare0PERMALINK
7:08 PM0PERMALINK
BHG 4th Gen
4th generation of BHG
We are the Black Hats.
We are also the ghosts who roam in Myanmar Cyber Network.
Greetz To: All Ex Generation Brothers ...
The Envy KiD
Mentors (Ex Gen):
Please use PGP key for secure communication
Archive February 2016 (2) January 2014 ( 1 ) October 2013 (3) August 2013 ( 1 ) July 2013 (2) June 2013 (5) May 2013 (6) April 2013 (4) March 2013 (3) February 2013 (5) January 2013 (4) December 2012 (3) October 2012 ( 11 ) September 2012 (4) August 2012 ( 10 ) July 2012 ( 15 ) June 2012 ( 45 ) May 2012 (3) April 2012 ( 12 ) March 2012 (3) February 2012 (9) January 2012 ( 14 ) December 2011 (9) November 2011 ( 21 ) October 2011 ( 17 ) September 2011 ( 32 ) August 2011 (6) July 2011 (7) June 2011 (4) May 2011 (3) April 2011 (7) March 2011 (5) February 2011 (6) January 2011 (3) December 2010 ( 1 )
© 2013 Blink Hacker Group | Blogger by BHG